Deblistering Machine NJLL-60N - China Halo Pharmatech Co., Ltd
NJLL-60N kuyinto imishini lobunikazi okungathatha amaphilisi, amaphilisi kanye nabanye ngokushesha ephuma ibhamuza amaphakethe ngu extrusion. Lokhu imishini kunezinzuzo ekhethekile ijubane layo eliphezulu, ukuphelela iphilisi ukuthatha, futhi harmlessness amaphilisi. Kuyinto imishini ovamile for iphilisi ukuthatha emakethe. Ukuze izinhlobo ezahlukene Aluminium Plastic Board (APB), NJLL-60N ifakwe izakhiwo nezimo ukuze asingathe kalula. Uma kuqhathaniswa nezinye izinto imishini efanayo, NJLL uchungechunge kukhona ekahle kakhulu iphilisi ukuthatha umshini ukuze enkulu imithi yokukhiqiza amabhizinisi, ikakhulukazi ngezinkinga zabo ukukhiqizwa ibhamuza.
NJLL-60N kuyinto umshini semi-automatic, ukusuthisa ngesandla futhi 60 PC / imiz njengoba isivinini zokusebenza. Kuyinto esebenzayo cishe zonke izinhlobo ibhamuza iphakethe.
Deblister Model Technical Imininingwane
60 nama-PC / iminithi
120 nama-PC / iminithi
Noma yiluphi uhlobo
0.008m³ / iminithi
Previous: Deblistering Machine NJLL-60A
Olandelayo: Deblistering Machine NJLL-120A